Ezikiel 19 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ iru uju gbasara ndị isi Izrel (1-14)
19 “Bụọ abụ iru uju gbasara ndị isi Izrel, 2 sị,‘Gịnị ka nne gị bụ? Ọ bụ nne ọdụm nke ya na ọdụm ndị ọzọ nọ. Ọ makpu ebe ọdụm ndị ọzọ siri ike makpu. Ọ nọkwa ebe ahụ zụọ ụmụ ya. 3 Ọ zụrụ otu n’ime ụmụ ya, ya etoo bụrụ ọdụm siri ike,+Mụtakwa otú e si adọgbu anụ. Ọ na-adọgbu ma mmadụ. 4 Mba dị iche iche nụrụ gbasara ya, jidekwa ya n’olulu ha. Ha jikwa nko dọkpụrụ ya gaa Ijipt.+ 5 Nne ya nọkwa na-eche ka ọ lọta. Ma, mgbe ọ chọpụtara na ọ gaghịzi alọta,Ọ zụrụ nwa ya ọzọ, meekwa ka ọ bụrụ ọdụm siri ike. 6 Nwa ya nke a na-esokwa ọdụm ndị ọzọ akpagharị, mechaakwa bụrụ ọdụm siri ike. Ọ mụtara otú e si adọgbu anụ, na-adọgbukwa ma mmadụ.+ 7 Ọ na-ezo n’ụlọ elu mba dị iche iche rụsiri ike, na-alakwa obodo ha dị iche iche n’iyi,Nke na a na-anọ ebe ọ bụla n’ebe ahụ anụ ụja ya.+ 8 Mba ndị gbara ya gburugburu bịara ka ha lụso ya ọgụ, gbasaakwa ụgbụ ha n’elu ya. Ha jidekwara ya n’olulu ha. 9 Ha ji nko dọrọ ya dọba n’ime nnukwu ngịga* ma butere ya eze Babịlọn. Ha kpọchiri ya ebe ahụ, ka a ghara ịnụ olu ya ọzọ n’ugwu niile dị n’Izrel. 10 Nne gị dị ka osisi vaịn*+ a kụrụ n’akụkụ mmiri. O nwere ọtụtụ alaka, mịakwa mkpụrụ n’ihi nnukwu mmiri ọ na-amịta. 11 Alaka* ndị dị na ya bịara sie ezigbo ike, nke na e nwere ike iji ha pịa mkpara ndị na-achị achị na-eji. O tokwara karịa alaka osisi ndị ọzọ. A na-ahụ ya anya n’ihi ogologo o toro nakwa n’ihi na alaka ya dị ọtụtụ. 12 Ma e mechara jiri iwe fopụ ya,+ tụsakwa ya n’ala,Ifufe nke si n’ebe ọwụwa anyanwụ mere ka mkpụrụ ya kpọọ nkụ. A gbajipụrụ alaka ya ndị siri ike, ha akpọnwụọ,+ ọkụ erepịakwa ha.+ 13 A kụkwara ya n’ala ịkpa,N’ala mmiri na-adịghị, nke kpọkwara nkụ.+ 14 Ọkụ bidoro rewe alaka* ya ndị buru ibu, sikwa na ya repịa alaka ya ndị obere nakwa mkpụrụ ya. O nweghịkwa alaka ọ bụla siri ike fọrọ na ya. E nweghị nke e nwere ike iji pịa mkpara ndị na-achị achị na-eji.+ “‘Ihe a bụ abụ iru uju. Ọ ga-abụkwa abụ iru uju a ma ama.’”
^ Ya bụ, keeji.
^ Na Hibru, “osisi vaịn dị n’ọbara gị.”
^ Ma ọ bụ “Mkpara.”